PARKROYAL Nay Pyi Taw ဟိုတယ်အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်များခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ် | MyanmarJobsDB
PARKROYAL Nay Pyi Taw ဟိုတယ်အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်များခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ်
Posted by MyanmarJobsDB | March 7, 2014 | Career Opportunity, News
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုများထဲတွင် တစ်ခု အပါဝင်ဖြစ်သည့် PARKROYAL မှ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော် နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဟိုတယ်တစ်ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သဖြင့် ၀န်ထမ်းသစ်များ စတင်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
Write in positions:
အောက်ပါ ရာထူးအလုပ်အကိုင်များကို စိတ်ဝင်စားပြီး နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုပါက အီးမေးလ်ဖြင့် CV ပေးပို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
1. Front Desk Manager
3. Administration Secretary
ထို့အပြင် CV ဖြင့် တစ်ခါတည်း ၀င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်သော Walk-in-interview အစီအစဉ်ကိုလည်း ၂၀၁၄ မတ်လ ၅ ရက်မှ ၂၁ရက် အထိ မနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ နေ့လည် ၃း၀၀ နာရီအတွင်း Jade Villa No. 13/14, Hotel Zone, Dekhina Thiri Township, Nay Pyi Taw, (Jade Villa, Junction Hotel Nay Pyi Taw) တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် အောက်ပါ အလုပ်အကိုင်များကို စိတ်ဝင်စားပါက လာရောက်လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
1. Administration Secretary
2. Income Auditor / Account receivable
3. Credit Supervisor / Cost Controller
4. General Cashier
5. Purchasing Supervisor / Cost Controller
6. Purchasing Cum Receiving Cum Store Clerk
7. Housekeeping Supervisor
8. Floor Supervisor
9. Florist cum Room Attendant
10. Public Area Supervisor
11. Gardner Supervisor
12. Uniform / Linen Supervisor & Order Taker
14. Spa & Fitness Supervisor
15. Spa Therapist
16. Guest Service Attendant
18. Bell Captain
19. Welcome Ambassador
20. Room Service Captain
22. Banquet Supervisor
23. Banquet and Graphic Artist
24. Commis I
25. Commis II
26. Commis III
27. Demi Chef
29. Stewarding Supervisor
30. Duty Engineer
31. Reservations Executive
32. Waiter/ Waitress
ဆက်သွယ်လျှောက်ထားရန် အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်
PARKROYAL Yangon – 01 254 745, 01 250 388
PARKROYAL Nay Pyi Taw: 067 810 6106, 09 431 25197
Photo Credit: https://www.facebook.com/PARKROYAL.Yangon
5699 total views, 1 today
Tags: nay pyi taw, park royal, recruitment program
One Response to “PARKROYAL Nay Pyi Taw ဟိုတယ်အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်များခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ်”
Comment made by Ma Shwe Sin Win on May 1st 2014 at 7:46 am: Log in to Reply